Ikhaya » Izindaba Zamuva » Ezokuzijabulisa » Amasekisi aseNyakatho ye-Ireland aphelelwa amahlaya
Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ezokuzijabulisa • Umculo • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba ze-UK Breaking • Izindaba Ezihlukahlukene
Akuwona wonke umuntu othanda ukuhlekwa kodwa kumuntu ongusomahlaya, iphupho lakho elibi kakhulu kungaba ukungakuhlekwa.
Kushaywa kanzima umkhakha we-circa wase-Northern Ireland.
Ama-clown afisayo azodinga ukwenza okungaphezulu kokuzicwecela kuphela kumaphayi we-makeup kanye ne-lob custard ukugcwalisa izicathulo ezinkulu zomsebenzi wabo.
Ukuba ngumhlekisi kufanele ukwazi ukuzithokozisa ngokwakho - akukhona ngokuhlekisa abanye abantu.
Amasekisi maduze azovakashela iNyakatho ye-Ireland futhi Amakholidi e-COVID-19 bakhululekile, kepha ngokusho kwemibiko yezindaba yaseBrithani, babhekene nokushoda okukhulu kwama-clown, abaphathi bamaseksi befuna ngamandla ukuthola abadlali abasha.
Njengamanje, umhlaba wonke uyazi UKInkinga kaphethiloli eqhubekayo, kodwa bambalwa kakhulu abantu ababonayo ukuthi kukhona nokushoda okukhulu kwama-clown e-Northern Irelandamaseksi.
Abaningi balaba badlali babuyela emazweni abo ekuqaleni kobhadane lwe-COVID-19 ngonyaka odlule, noma sebephumele phesheya ukuyofuna umsebenzi emazweni asevele avulwa kabusha.
Ngenqubo ye-visa yama-clown okungewona e-EU iyinkimbinkimbi, abanikazi bamasekisi bazama ukufinyelela kunoma yibaphi abantu ekhaya abazizwa sengathi bangayivumela.
Ama-clown afisayo kuzodingeka enze okungaphezulu kokuzicwecela kuphela kumaphayi we-makeup kanye ne-lob custard ukugcwalisa izicathulo ezinkulu zomsebenzi wabo. Ngokusho komunye umnikazi wesekisi, lapho ungena eringini lesekisi futhi unabantu abangu-700 kuya ku-800 ababhekile kuwe, noma ngabe ukuhloboni kwemizwa okuyo kufanele ukhanyise leyingi esekisini. Kufanele ukwazi ukufunda izithameli zakho, emizuzwini embalwa emfushane kufanele ukwazi ukuthola ubudlelwano ozohamba nabo futhi uhlanganyele futhi ubanikeze ukudla.
Ngenkathi amahlaya ezibhalela, ibhizinisi lokuhlekisa akuyona into ehlekisayo, ochwepheshe bezimboni bathi: “Akuwona wonke umuntu othanda ukuhlekwa kodwa kumuntu ongusomahlaya, iphupho lakho elibi kakhulu kungaba ukungahlekwa. "
"Kumele ukwazi ukuzihlekisa ngawe, akukhona ukuthi uhlekise ngabanye abantu."
Indiza yaseBrithani iRAF F-35 ishayisa...
Ukwelashwa okusha kwe-Plaque Psoriasis